ट्रम्प आफैले भने, ‘कोरोनाबाट अमेरिकामा दुई लाख जतिको ज्यान जान सक्छ’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
ट्रम्प आफैले भने, ‘कोरोनाबाट अमेरिकामा दुई लाख जतिको ज्यान जान सक्छ’
अमेरिकामा आगोझै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाबाट यहाँ दुई जतिको ज्यान जानसक्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाबाट अमेरिकामा धेरैले ज्यान गुमाउने सम्भावना रहेको बताएका हुन् । ट्रम्प अगाडि अमेरिकी सरकारका एक जना अग्रणी विज्ञले कोरोना भाइरस महामारीले दुई लाख अमेरिकीको ज्यान लिनसक्ने र दशौं लाखमा उक्त भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कोभिड १९ कार्यदलका एक व्यक्तिर सरुवारोगविज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले आइतबार नै त्यस्तो बताएका थिए । डाक्टर एन्थोनी फाउची अमेरिकाका मुख्य सरुवारोग विशेषज्ञ मानिन्छन् ।
सोमबारसम्म अमेरिकामा १ लाख ४२ हजार ७३५ कोरोना संक्रमित छन् । त्यहाँ दुई हजार ४८८ व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । अमेरिकामा गएको दुई दिनमा मृतकको संख्या दोब्बरले बढेपछि डा. फाउचीको पछिल्लो भनाइ आएको थियो ।
शनिबार ट्रम्पले डा. एन्थोनी फाउचीको अनुसन्धानमा सहमति जनाउँदै अमेरिकामा धेरैले ज्यान गुमाउने जानकारी दिएका हुन् । यद्यपी ट्रम्पले अमेरिकामा सबैले कोरोना भाइरसविरुद्ध उल्लेखनीय काम गरिरहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भेन्टिलेटरको अपर्याप्त व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको छ । अमेरिकाका आधाजसो सङ्क्रमित न्यूयोर्क राज्यमा छन् । ट्रम्पले आउँदा दुई सातामा मृत्युदरको उच्च विन्दू पुग्ने भएकाले सरकारी मार्गदर्शनहरू विस्तारित गरिएको बताएका छन् । जसमा उच्च प्रभावित न्यूयोर्क, न्यूजर्सी एवं कनेटिकट राज्यका मानिसहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा यात्रा नगर्न भनिएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, जेठ २३ २०७७ ११:२४:०२